विश्वकै सबैभन्दा धेरै चिसो हुने शहरमा किन बस्छन् मानिस ? यस्तो छ वास्तविक कारण – Medianp
विश्वकै सबैभन्दा धेरै चिसो हुने शहरमा किन बस्छन् मानिस ? यस्तो छ वास्तविक कारण
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, पुष २५, २०७५१४:१८0
एजेन्सी,२५ पुस । संसारकै सबैभन्दा चिसो ठाउँ रुसको सूदूर शहर याकूत्स्कमा २,३ र ४ डिग्रीको आसपासमा तापक्रम मापन गरिन्छ । त्यहाँको तापक्रम ५० डिग्री सेल्सिियस भन्दा काम रहेको छ । रुसको आर्टिक रेखाबाट ४५० किलोमिटर उत्तर क्षेत्रमा रहको यो शहर पोर्ट सिटीको नामले चिनिन्छ ।
लेना नदीको किनारमा अवस्थित यो शहरको जनसख्या २ लाख ५० हजार रहेको छ भने १६२२ मा स्थापना भएको उक्त शहरमा सुन र खनिज पदार्थको भण्डार रहेको कारण निकै लोकप्रिय रहेको छ । सुन खनिज पदार्थको खानी रहेको यो शहरमा तिब्र जनसँख्या वृद्धि हुन थालेको छ । तकू मूलका यातूक ब्यक्तिहरुको मातृभूमि भनेर चिनीने यो शहरमा १३औँ, १४ औँ शताब्दीमा बयकाल झीलको किनारबाट ती मानिसहरु यो शहरमा बसोबास गर्न आएको मानिएको छ ।
यसरी रुसी राज्यको विस्तार भएपछि सन् १६३२ मा उक्त बस्ती फैलिएके र प्योत्र बेकेतोवले किल्ला समेत निर्माण गरेको हो । नोभेम्बर १८ देखि सुरु हुने जाडो मौसम १ मार्च सम्म रहन्छ । औसत तापक्रम २३ डिग्री सेल्सिियर रहेको छ । यहाँ सबैभन्दा धेरै जाडो जनवरीमा हुने गर्छ । माइनस ३६ डिग्री सेल्सिियस र न्यूनतम तापक्रम माइनस ४१ डिग्री सेल्सियस रहन्छ । यो ठाउँको तापक्रम प्राय ५६ डिग्री सेल्सियस सम्म नै रहन्छ ।
माघे सक्रान्तिमा खाइने खिचडीका यस्ता हुन्छन् फाइदाहरु !
यी हुन् सबैभन्दा सुन्दर जिम प्रशिक्षक रिची शाह, हेर्नुहोस् उनका हट तस्विरहरु
“कानुनी रुपमा बाध्यकारी परिवर्तन”मा सहमति भयो – बेलायत
अमेजनका मालिक जेफ बेजोज भन्दा ३ गुणा धेरै सम्पत्ति भएका यी हुन् मानव इतिहासकै धनी व्यक्ति !